तीन वर्षको अवधिमा ४८८ महिला तथा बालबालिका फेला - नेपालबहस
गृहपृष्ठ समाचार तीन वर्षको अवधिमा ४८८ महिला तथा बालबालिका फेला
तीन वर्षको अवधिमा ४८८ महिला तथा बालबालिका फेला
२२ असोज दमौली । जिल्लामा तीन वर्षको अवधिमा हराएका ४८८ जना महिला तथा बालबालिका फेला परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ५१३ महिला तथा बालबालिका हराएको निवेदन परेपछि प्रहरीको सहयोगमा ४८८ महिला तथा बालबालिका फेला परेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५६, ०७५/७६ मा २२८ र चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २९ जना महिला तथा बालबालिका हराएको निवेदन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले जानकारी दिए । प्रहरी उपरीक्षक सिलवालका अनुसार आव ०७४/७५ मा २५६, ०७५/७६ मा २२२ र ०७६/७७ मा १० जना महिला तथा बालबालिका फेला परेका छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक सिलवालका अनुसार चालू आव ०७६/७७ मा पनि ८४ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये आव ०७३/७४ मा ३७८ फछ्र्यौट भई १, ०७४/७५ मा ३०७ फछ्र्यौट भई ७१ र ०७५/७६ मा ३६७ फछ्र्यौट भई ५६ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ भने चालू आवमा ५४ फछ्र्यौट भई ३० मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, जबर्जस्ती चोरी, लागुऔषध लगायतका मुद्दा बढिरहेको सिलवालले बताए ।
अघिल्लो लेखखड्गजात्रासहित घोडाजात्रा सम्पन्न
अर्को लेखदैलेखमा लास बोकेको ट्रयाक्टर दुर्घटना, एक जना घाइते !
कैलारी गाउँपालिकामा तीन हजार २९६ बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाको खोप
” गिट्टी कुट्नु रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो ! पढाइ खर्च जुटाउनै प¥यो “
कोरोनाको त्रासकाबीच नियमित खोप सेवा शुरु